fivarotana fitafiana - Etagtron, Inc.
Vahaolana amin'ny fivarotana akanjo
Ny vavahady dia apetraka eo amin'ny fidirana amin'ny fivarotana, ny haben'ny vavahady dia voafaritra amin'ny sakan'ny fidirana sy ny karazana vavahady.
Ny marika na marika inona no hampiasanao anao?
Tag fiarovana ho an'ny akanjo:
vanin-taona mafana akanjo, lamba maivana toy ny akanjo, zipo, akanjo milalao, T-shirt, Etagtron dia manome marika fiarovana miaraka amin'ny pin fohy 16mm na namboarina ho fiarovana azy ireo. Indrindra ho an'ny lamba landy, mampiasa ny marika Etagtron misy lanyard amin'ny alàlan'ny bokotra, izay tsara kokoa hisorohana ny fahasimbana.
Torohevitra: Atsofohy amin'ny akanjo ny pin, avy eo atsofohy moramora ao anaty marika. Aza terena hiditra ao amin'ireo marika mihitsy ny pin.
Ririnina akanjo, Etagtron koa dia afaka manome marika fiarovana miaraka amin'ny pin lava na marika lanyard namboarina ho fiarovana ny Down.
Tag fiarovana ho an'ny kiraro:
Etagtron dia manolotra karazana tag maromaro hiarovana ny karazana kiraro.
Tag fiarovana ho an'ny kitapo sy valizy:
Ny kitapo sy Luaages dia an'ny entana lafo vidy, mazàna mampiasa marika fanairana ho an'ny tena mba hahitana vokatra fiarovana tsara kokoa. Etagtron dia manolotra karazana tenifototra fanairana samirery maro mba hifanaraka amin'ireo kitapo sy hampiroboroboana ny sarinao.
Tag fiarovana ho an'ny lamaody Accessories:
Ahoana ny fanesorana ireo tag?
Aorian'ny fandoavam-bola dia azonao atao ny manaisotra ireo fiarovana ireo amin'ny lahatsoratra miaraka aminay mpamitaka na mpanala.
Ny habetsaky ny detacher na ny deactivator dia voafaritra amin'ny habetsaky ny latabatra mpanambola.
Mampiasà mpametaveta magnetika hamongorana ny marika fanidiana hidy andriamby. Ho an'ny hidy andriamby, misy karazana hidy roa: hidin-trano mahazatra sy hidin-trano lehibe, ho an'ny hidin-trano mahazatra, azonao atao ny mampiasa ny mpamadika miaraka amin'ny hery 8000gs hamongorana azy, ho an'ny hidin-doha lehibe, ilainao hampiasa detacher miaraka amin'ny hery magnetika 16000gs.